Wararka - Waa maxay wadista la dilay iyo faa'iidooyinkeeda
Waa maxay wadista la dilay iyo faa'iidooyinkeeda
Nooc ka mid ah tamar nadiif ah oo aan wasakh lahayn, tamarta qorraxda waxay leedahay rajo horumarineed oo aad u ballaaran, waxayna noqotay tamar cagaaran oo dalal badani soo saaraan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaatooyin qaar ka mid ah tamarta qorraxda, sida cufnaanta hooseysa, is-dhex-galka, iyo jihada iyo xoojinta iftiimintu waxay isbeddelaysaa waqti. Inta badan baalayaasha cadceedda soo jireenka ah waxaa lagu hagaajiyaa xagal cayiman, taas oo aan ku beddelneyn booska qorraxda, taasoo si ba'an u saameysa waxtarka beddelka sawir-koronto. Marka loo eego xisaabinta: haddii ay jirto leexasho 25 digrii ah oo u dhexeysa nidaamka sawir-qaadaha iyo iftiinka qoraxda, awoodda wax-soo-saarka ee qalabka sawir-qaadista ayaa hoos loo dhigi doonaa illaa 10% sababtoo ah hoos u dhaca tamarta shucaaca dhacdada tooska ah.
Sanadka oo dhan, guga, xagaaga, dayrta iyo jiilaalka, soo bixida iyo dhicitaanka qorraxda iyo xagasha ileyska qorraxda maalinba maalinta ka dambaysa way isbedelayaan. Sidaa darteed, sida loo beddelo xagasha guddiga batteriga oo leh xagal iftiin leh si loo hagaajiyo heerka beddelidda sawir-qaadista ayaa u baahan annaga dilay wadid . Maanta, waan ku geyn doonaa si aan u ogaado waxa uu yahay dilid diliddu.
1. Qeexitaanka dilay wadid.
Qalabka loo yaqaan 'Slew drive' waa nooc cusub oo ah alaab wareegaya, oo ka samaysan dixirigoodu, giraanta gawraca , qolof iyo mootada Maaddaama qaybta aasaasiga ahi ay qaaddo dhalista dhuxusha, markaa waxay qaadi kartaa xoog axial, xoog shucaac ah iyo rogrogis daqiiqad isku mid ah. Slew drive iyo alaabooyinka wareega ee isbarbar dhiga marka la barbardhigo, waxay leedahay astaamaha rakibaadda fudud, dayactirka fudud iyo keydinta boos rakibaadda illaa heer aad u ballaaran. Badeecadani waxaa loo isticmaali karaa saxan culusgaadiidka qaadida, wiishka wiishka, wiish gaari xamuul ah iyo hawlgal sare.
2. Qaab dhismeedka wadista wadista
Gawaarida loo yaqaan 'Slew drive' waxaa loo qaybin karaa hal dirxi dixiriga ah, dixiriga dixiriga ah ee laba geesoodka ah iyo nooca gaarka ah ee wareega wareega. Xuzhou Wanda oo wadata dhalmada co., Ltd waxay keeni kartaa wadista lagu dilay SE Seires iyo WEA Series.
Taxanaha SE wuxuu qaataa naqshad dhismeedka dixirigoodu toroidal, xiriir ilkaha badan, iska caabin saamayn xoog leh, ku habboon load light iyo codsiyada xawaare yar. Sida nidaamka raadraaca qoraxda, Qalabka ilaalinta deegaanka yaryar iwm.
Taxanaha WEA wuxuu qaataa naqshad qaab dhismeedka dusha ilkaha oo qalooca, kaas oo leh awood badan oo anti-daal iyo awood dheereyn ah. Waxay ku habboon tahay codsiyada culus iyo xawaaraha dhexdhexaadka ah. Sida qalabka dhismaha, mashiinada dhismaha iwm.
3. Sedex faa iidooyin oo ku saabsan wadista gawraca
Sababtoo ah isdhexgalka sare ee wadista gawaarida, adeegsadayaashu maahan inay iibsadaan oo ay socodsiiyaan qayb kasta oo ka mid ah qalabka wareejinta mid mid. Ilaa xad, waxay sidoo kale yareyneysaa habka diyaarinta bilowga wax soo saarka, sidaas darteedna si weyn u wanaajinaysa wax soo saarka shaqaalaha.
Qalabka dixiriga ah gudbinta waxay leedahay astaamaha dib u noqoshada is-quful, kaas oo ogaan kara is-qufulka gadaal, taas oo ah, dixiriga oo keliya ayaa wadi kara qalabka dixiriga, laakiin ma ahan qalabka dixiriga. Cunsurka badbaadada mashiinka ugu weyn iyo qalabka wax lagu gawraco ayaa si weyn loogu hagaajin karaa hawlgalka joog sare. Marka loo barbardhigo badeecadaha dhaqameed ee dhaqameed, wadid dishay wuxuu leeyahay faa'iidooyinka rakibidda fudud, dayactirka fudud iyo keydinta booska.
c.) Fududee naqshada martida
Marka loo barbardhigo gudbinta qalabka dhaqameedka, gudbinta qalabka dixiriga waxay heli kartaa saamiga yaraynta yaraanta. Xaaladaha qaarkood, waxay u badbaadin kartaa qaybaha dib u habeynta mashiinka weyn, si loo yareeyo qiimaha iibka ee macaamiisha isla markaana si weyn loo yareeyo heerka fashilka mashiinka weyn.
Waxyaabaha kor ku xusan waa hordhaca wadista gawaarida. Haddii aad qabtid su'aalo kale, waad nala soo xiriiri kartaa markale, ku soo dhowownala soo xiriir !